Izinganekwane Ezivamile Namaqiniso Mayelana Nokufakwa Kwesistimu Yelanga
4 amaminithi afundiwe
Inganekwane 1 - Ukufakwa kwesistimu yelanga kuyabiza, ngakho-ke kungenzeka kuphela kubantu abacebile
Empeleni - Izinketho zesimanje zezimali zokufakwa kwesistimu yelanga zisuse umgoqo omkhulu wokuqala izindleko. Ukusetshenziswa kwamandla elanga kuyisinqumo esihlakaniphile ngoba kunciphisa izikweletu zenyanga zonke, kakhulu.
Abantu bangasebenzisa leyo mali eyengeziwe abayikhokhela njengamanje uma kuqhathaniswa nezikweletu zikagesi ngokufaka amaphaneli elanga azozikhokhela wona kungakapheli iminyaka engu-7 kuya kwengu-15. Ngenhlanhla, abantu abahlala kulezo zifunda, lapho izikhuthazi zinhle khona-ke isikhathi sokubuyiselwa sifushane okusho ukuthi iminyaka emi-2 kuye kwemine. Ngokuthola izinketho eziningi zezezimali loslesangeles.solar
Inganekwane 2 - Amapaneli elanga azokwehla uphahla
Empeleni - Empeleni, amapaneli elanga avikela uphahla alumbozayo. Uma kwenzeka, uphahla ludinga ukulungiswa bese amaphaneli angasuswa kalula. Amapaneli amaningi elanga abekwe ohlelweni lokuthuka kunokuba abheke ngqo ophahleni. Uma uphahla lwakho luvuza vele bese kuwukuhlakanipha ukuthi ulungiswe ngaphambi kokufakwa kwephaneli yelanga.
Inganekwane 3 - Amandla elanga awakhiqizwa ngezinsuku ezisibekele noma zenkungu.
Empeleni - Iqiniso ngukuthi amaphaneli elanga umsebenzi ngokuyimpumelelo emazingeni okushisa apholile. Amandla akhiqizwa ophahleni lwedolobha elibandayo abike ukuthi akhiqize u-1% wamandla amancane kunesifunda esiseduze esijabulela isimo sezulu esishisayo nesinelanga.
Inganekwane 4 - ukufakwa kohlelo lwe-PV kuzokhuphula intela yempahla
Empeleni - Ezifundazweni eziningi, ukufakwa kwesistimu yelanga akubophezeli intela yempahla. Kusukela kokutshalwa kwezimali, ukufakwa kwephaneli yelanga kungakhuphula inani lokubuyiselwa kwendlu ngaphandle kokubiza okungaphezulu uma kuqhathaniswa nentela yempahla. Ngenye indlela, lokhu akunakuba yiqiniso ngokutshalwa kwezimali kwasekhaya okufana nedeski entsha noma ichibi lokubhukuda.
Inganekwane 5 - Amapaneli elanga okuhlala awakhi amandla, ebusuku.
Empeleni - Ngokusobala, ukukhiqiza amandla elanga akunakwenzeka ebumnyameni ngokuphelele. Izinhlelo zesimanje ziboshelwe kugridi. Emini, lapho uhlelo lukhiqiza amandla, okweqile kufakwa kugridi kagesi ngohlelo lokulinganisa ngamanethi. Lapho amandla athe xaxa edliswa kugridi imitha ijikele emuva.
Uthola udumo ngalo mandla. Ngesikhathi kusibekele noma ebusuku ungasebenzisa igridi yamandla, engeke ikhokhiswe ngenxa yekhredithi osuvele uyenzile. Impela, amabhethri angasetshenziselwa ukugcina amandla amaningi, kepha makhulu, ayabiza futhi adinga ukushintshwa kungakapheli iminyaka emihlanu kuya kweyishumi. Ngakho-ke uhlelo oluboshwe ngegridi lulula kakhulu.
Inganekwane 6 - Amapaneli elanga kunzima ukuwagcina
Empeleni - Amasistimu elanga ahlala isikhathi esingaphezu kwewaranti yawo yeminyaka engama-25. Amapaneli elanga awabandakanyi izinto ezihambayo, ngakho-ke ukugcinwa okujwayelekile akudingeki. Udinga nje ukukhipha amaphaneli ngamanzi kanye ngonyaka. Uma uncika emvuleni ukuze uwahlanze kuzolahlekelwa ukusebenza kahle okuncane. Ngokusobala, imfucumfucu emikhulu izodinga ukususwa.
Inganekwane 7 - Uhlelo lweSolar PV lubukeka lungathandeki ophahleni lwendlu
Empeleni - Ngenxa yokwazisa mayelana namandla avuselelekayo ahlakaniphile, abakhiqizi bamapaneli elanga baklame izitayela eziningi ezihlukile kunezendabuko. Isibonelo, uphahla lwamafilimu olungafakazeli futhi lucekeceke ophahleni lwelanga. Zihlangana kahle nawo wonke amaphahla ophahla futhi zihlakaniphile futhi ziphansi.